तलब भत्ता नखाने ? अरु सबै खाने ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक ७, २०७७ नारायणी देवकोटा
बाजेको पालादेखि राईटर खलकका तुलसीलाल श्रेष्ठले आफ्नो सर्टिफिकेट फालिदिएको कुरासँग जीवनमा कुनै दिन पूरा निद्रा सुत्न नपाएको गरिब, दलित मजदुर जो कहिलेकाहीं जुलुसमा उभिन्छ उसले आफूले छोड्न गुमाउन केही नभएको कथा छ । यो कविता म बेलाबेलामा सम्झिरहन्छु । पछिल्ला दिनमा संसद सचिवालयले सांसद र उनीहरुका पिएलाई दसैँ भत्ता खातामा जम्मा गरिदिएपछि प्रकाशित समाचार र सामाजिक संजालका पोष्टहरु हेर्दा मैले पटकपटक यो कविता सम्झिएँ । समाचार सार्वजानिक भएसँगै केही नेताहरुले आफू नजिकका सञ्चारमाध्यम, मानिस वा आफ्नै सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफूले केही महिनादेखि तलब भत्ता नलिएको, कसैले दसैँ भत्तामात्रै नलिने वा कसैले खातामा जम्मा भएको भए फिर्ता गर्ने कुरालाई सार्वजनिक गरिरहेका छन् । थोरैले कोरोनाको महामारीमा आममानिस बेरोजगार बनिरहेको समयमा दसैँभत्ता नलिन प्रणालीगत नै निर्णय गरौं भनेका छन् भने त्योभन्दा पनि थोरैले काम गरेपछि तलब भत्ता किन नलिने भनेर उठाएको स्वर मधुरो मधुरो सुनिन्छ ।
यो लेख त्यागको राजनीति, जिम्मेवारीको विषयमा कुरा नगर्ने सांसद र नेताहरुको आर्थिक अपारदर्शी जीवनशैली र भ्रष्टाचारको निरन्तरतामा केन्द्रित छ ।
यो लेख लेख्दै गर्दा स्पेनमा डाक्टरहरुले तबल बढाउने माग राखेर नाङ्गो जुलुस निकालेका दृश्य ट्विटरमा आएका छन् । नेपालमा नै कुरा गर्दा विभिन्न प्रकारका, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय डुब्दै गरेका कारण धेरैको रोजगारी गुम्न लाग्दा कामदारलाई बिनापारिश्रमिक काममा लगाउन नहुने र काम गरिरहेका कर्मचारीलाई निकाल्न नहुने आवाज चर्को गरी उठिरहेको छ । यसरी आवाज उठाउनेको मुख्य तर्क हो विगत आठ महिनादेखि उद्योग, व्यापार, व्यवसाय ठप्प भए पनि त्योभन्दा अगाडि दशकौंदेखि जम्मा भएको मुनाफाबाट यो महामारीमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ भन्ने तर्क ।
तर, कतिपय क्षेत्रमा ‘यतिबेला राम्रो आम्दानी नभएका कारण काम गरिराख्नु (अर्थात् जागिर जोगाउनु पैसा हुँदा दिने हो)’ भनिरहेको अवस्था पनि छ । त्यसमाथि नेपाली समाजको एउटा तप्काले सधैँ नै कामको क्षेत्रलाई ‘स्वायन्त सुखाय’को रुपमा लिने गरेको छ । लेखन, पत्रकारिता, शिक्षण वा सामाजिक काममा ‘पैसाको लागि काम नगरेको’ दावी गर्नेको सार्वजानिक मञ्चमा हुने उपस्थितिको कमी छैन । यस्तो प्रकारको कुरा गर्ने मानिसले समाजमा कुनै न कुनै रोल मोडल खोजिरहन्छन्, उनीहरुलाई अगाडि सार्छन् र प्रचार गर्छन् ।
सतहमा हेर्दा यो एक प्रकारको असल नियत देखिए पनि गहिरिएर हेर्दा यो सीमान्तकृत समुदाय (जसलाई हातमुख जोड्न, एक सरो लगाउन, छोराछोरीलाई साधारण नै भए पनि विद्यालयको शिक्षा दिन धौ धौ परिरहेको वर्ग) लाई सधैँ शोषण गरिरहने हतियार हो । शक्तिशाली पक्षले आफ्ना विचार—नीति लाद्ने, सदाबहार सत्तामा टिकिरहने र शोषण कायम गरिरहने एउटा प्रक्रिया हो ।
सांसद भइसकेको मानिस त त्यस प्रकारको सीमान्त समस्याबाट माथि उठेको हुन्छ नि भन्ने तर्क पनि पक्कै आउला । हो, सांसद भएका धेरै मानिस त्यसप्रकारको सीमान्त समस्याबाट माथि उठेका मानिसहरुको समूह छ । तर, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएका धेरै सांसद सीमान्तकृत समुदायका छन् (आफ्नो व्यापारिक स्वार्थलाई नीतिगत रुपमा पूर्ति गर्नको लागि करोडौंको थैली बुझाएर गएका थोरैबाहेक) । उनीहरु सीमान्तकृतको बोली बोल्दा–बोल्दा थाकेर आफैं कयौं ठाउँमा सीमान्तकरणमा परेका व्यक्तिहरु पनि छन् । जो संसदले दिने तलब/भत्ताकै भरमा काठमाडौंमा जेनतेन बसिरहेका छन् । आफ्नो भागमा परेको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका पनि छन् । र, सत्ताको तर मार्न सिकेका पनि छैनन् । हामीले गरिरहेको विरोधको मारमा हिजोसम्म समाजमा दोस्रो, तेस्रो, चौथो दर्जामा पारेर दमनको चक्रमा पिसिएकाहरु पनि छन् भन्ने कुरा भुल्न मिल्दैन ।
काम चाहियो, त्याग होईन
हरेक दिन समाचार सुन्दा, पढ्दा हेर्दा एउटा न एउटा यस्तो निर्लज्ज समाचार आउँछ, जसलाई देख्दा लाज पनि लजाउँछ, सायद । चाहे त्यो असुरक्षित—जोखिमपूर्वक घर फर्किएका वा विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका नागरिक हुन्, महिनौंदेखि रोजगारी गुमाएर एक छाक भातको लागि लाइनमा लागेकाहरु हुन्, चाहे पीसीआर टेस्ट गर्नका लागि रातभरि लाम बसेका, क्वारेन्टाइनमा अव्यवस्थित रुपमा राखिएका, बस्न बाध्य पारिएका मानिसको मानसिकतामा परेको प्रभाव होस् वा महिला—दलित समुदायमाथि भएको दुर्व्यवहार र दमनमा सामूहिक रुपमा बोल्न सांसदहरु सकिरहेका छैनन् यति बेला (सार्वजानिक खपतका लागि बोल्नेबाहेक) । जो बोलेका छन् उनीको स्वर झिनो छ ।
अप्ठेरो अवस्थामा आफ्ना जनप्रतिनिधि मुखर भइदिनुपर्नेमा केही अपवाद छोडेर धेरै सांसदसँग संसदमा गएपछि यो–यो काम गरें भनेर भन्न सुनाउनका लागि खास कुरा छैनन् । र, त आमरुपमा आफ्ना त्यागको कुरा गरिरहेका सांसदहरु आममानिसका दुःखमा मलाम लगाउनका लागि यो बीचमा के काम गरें भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् । न त यो–यो काम गर्न खोज्दा यति–यति कारणले गर्न सकिएन भन्ने कुरा नै बताउन सक्छन् । बलियो सरकार भएपछि आममानिसको जीवनमा परिवर्तन आउला भन्ने धेरै मानिसको अपेक्षा थियो । सोही अपेक्षा पूरा हुने देखेर होला सायद निर्वाचनपछि निदाएको प्रतिपक्ष भागबण्डाको सुगन्ध पाउँदा बिउँझने अरु बेला निद्रामा नै रहने हालमा छ ।
सामाजिक संजालमा काम पनि नगरेको भएर भत्ता लिन नहुने तर्क पनि उठिरहेको छ । तर, काम पनि नगर्ने, तलब भत्ता पनि नलिने भए त्यत्रो खर्च र तामझाम गरेर केका लागि सांसद भएको हो भन्ने सोध्न सकिने प्रश्नमा सांसदहरुले के उत्तर दिने होलान् ?
अपारदर्शी जीन्दगी, त्यागको नाटक
निर्वाचनको समयमा आममानिसहरुमा हुने धेरै तर्कवितर्कमध्ये एउटा हुन्छ ‘धनीलाई मतदान गर्‍यो भने उसले भ्रष्टाचार गर्दैन’ भन्ने । त्यसमाथि अहिले त हरेक पार्टीले कुनै न कुनै नाम वा बाहनामा धनाढ्यलाई मनोनित गरेर ल्याउने चलन पनि बसेको छ । तर, ती धनाढ्यहरुले कसको हितमा काम गरेका छन् ? खोतलेर हेर्ने हो भने अपवादबाहेक भ्रष्टाचारको कुरुप तस्बिर देखिन्छ ।
त्यसमाथि निर्वाचनको टिकट वितरण गर्दा नै कसले करोडौं खर्च गरेर जित्न सक्छ भन्ने जाँचेर नै सबै पार्टीहरुले टिकट वितरण गर्ने गर्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठ्न चाहने महिलाहरुलाई अनिवार्यजस्तै सोधिएको प्रश्न थियो, ‘खर्च धेरै हुन्छ के आधारमा उठाउनु हुन्छ ?’
एकातर्फ सरकारले नै भनेको वैध आम्दानीको खास कुनै स्रोत नभएको व्यक्ति करोडौं खर्च गरेर सांसद भएको छ, मासिक लाखौं खर्च हुने गरी राजसी ठाँटबाँटमा हिँडिरहेको छ । सांसद भएपछि उल्लेखनीय काम त यस्तै हो, संसदका छलफलमा भाग पनि लिएको छैन (जुन संसद चालु हुँदा देखिने खाली कुर्सीले पुष्टि गर्छन्), समाजलाई गरिबी, शोषणको दलदलबाट निकाल्न कुनै योगदान पनि देखिँदैन अनि उसैले तलब भत्ता लिन्न भनेर आफूलाई चोख्याउन खोज्छ । अनि जिन्दगी केले चलेको छ त भनेर सोधिदिने मानिसको सर्वथा कमी छ ।
पारिश्रमिक, श्रम नलिने कुराले कुनै पनि पदको मानिसलाई आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार नबनाउने त छँदैछ, वैचारिक रुपमा बिनापारिश्रमिक काम गर्ने गराइने कुराले सीमान्तकृत वर्गमाथिको शोषणलाई पनि वैधानिकता प्रदान गर्छ । त्यसमाथि विगतदेखि भइरहेको भ्रष्टाचार र भागबण्डाको चक्र तोड्न नचाहने, कुनै ठाउँमा सरुवा, बढुवा वा जागिरको लागि एक कल लगाइदिएवापत आउने भेट लिन पनि नछोड्ने, बिना कुनै वैध बाटो राजसी ठाँटले जीवन बिताउने जीवनशैलीले ‘भत्ता नखाने अरु सब्बै खाने’ अलिखित अघोषित नीति हो ? भनेर सोध्न त पाइएला नि ?
प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७७ १५:२५
विशाल मरुभूमिमा एक्लै । दुई चार दिन हो भन्दै इन्डियन फर्क्यो । दिमागबाट बेली डान्स, पातलो कम्मर, हुक्का र ऊँटको सेकुवा क्रमशः धुमिल हुँदै गयो । म कठोर यर्थाथमा नराम्रोसँग बजारिएँ । यर्थाथमा महानीरवता थियो । र थियो एकाध घण्टामा आउने बालुवाको आँधी ।
कार्तिक ७, २०७७ प्रकाश थाम्सुहाङ
पहिलो लकडाउन । घरबाट निस्कनु प्रतिबन्ध थियो । राज्यको आदेश छँदै थियो, साथमा नौलो महामारीको भय पनि । के सहर, के गाउँ मानिस घरमै लुकेर बसेका थिए । बरण्डामा निस्केर हेर्छु घोर सन्नाटा छ । चारैतिर चकमन्न । सामाजिक सञ्जाल खोलेर हेर्‍यो रित्तो रित्तो सडकहरु । लाग्थ्यो यो पृथ्वीमा घोर विपत्ति आउनेवाला छ र मानिसहरु यो ग्रह छोडेर कुलेलाम ठोकिसके ।
त्यो अत्यासलाग्दो समयमा सिनेमा समय बिताउने र महामारीको भयबाट ध्यान मोड्ने उपयुक्त माध्यम बनिदियो । लकडाउनको समय मित्रहरुको सिफारिसमा निकै हेरियो सिनेमा । कुनै बखत लाग्यो म सिनेमा म्याराथनमा छु । यसबीच, सिनेमा अभिव्यक्तिको उत्कृष्ट माध्यम हो भन्ने फेरि बोध भएर आयो । प्रस्तुति उम्दा भयो भने सिनेमा कलाको समुच्य रुप हुँदोरहेछ ।
सिनेमामाथि अलिकति पनि जानकार छु भन्ने ममा भ्रम छैन, तर म इमान्दार दर्शक हुँ भन्नेमा विश्वस्त छु । जस्तो कि कुनै कुनै सिनेमाहरुले मस्तिष्क यस्तो रन्थनाउँछ कि त्यसको ह्याङ धेरैदिनसम्म रहिरहन्छ । लकडाउनकै बीच साथीहरु रोशन र सुरेन्द्र राईको सिफारिसमा ‘कास्टअवे’ भन्ने अंग्रेजी सिनेमा हेरियो । एउटा कुरियर बोक्ने हवाइजहाजको दुर्घटनापछि बाँच्न सफल व्यक्ति जो वर्षौं टापुमा एक्लै बाँच्न अभिशप्त हुन्छ को कथा थियो – कास्टअवे । एक्लै निर्जन ठाउँमा एउटा एक्लो मानिसले बाँच्नका लागि गरेको संघर्षको कथा, जीवनप्रति उम्लेर आउने अथाह मोह भएको सिनेमा हेरिँरहदा म स्मृतिको गर्तमा भाँसिदै गएँ ।
तीन दशकअघिको समय । इलाम चोक बजार । यहाँबाट थोरै पूर्व लाग्दा एउटा पसल थियो । पसल बाहिर बोर्ड टाँगिएको हुन्थ्यो सिर्जना स्टोर । मेरो मानसपटलमा अझै ताजा याद छ त्यहाँ एक अंकल बस्थे जो मोटो पावरवाला चश्मा लगाएका हुन्थे । त्यो पसलमा म प्रायः गइरहन्थे । त्यहाँ डट्पेन कपी किन्थे । त्यो पसलको आर्कषण केमा पनि थियो भने त्यहाँ कमिक्स पाइन्थ्यो । चाचा चौधरी सिरिजको मलाई व्यग्र प्रतीक्षा हुन्थ्यो । अहिले यसो गम्छु, मेरो बाल मस्तिष्कमा कल्पनाशीलताको उडान भर्न मद्दत गर्ने त्यही कमिक्स थियो । र पढ्न लत लगाउने सिर्जना स्टोर । हिन्दी सिनेमा र कमिक्स नै हिन्दी भाषामाथि थोरै पहुँच पुग्नलाई आधार थियो, अहिले लाग्छ । केही समयपछि त्यहाँ नेपाली पत्रिका मुना पनि आउन थाल्यो । मुना अघोर मन पर्न थाल्यो मलाई ।
दसैंको लामो स्कुल बिदामा चङ्गा उडाउनु, साथीहरुसँग गुच्चा खेल्नु र पढ्नु नै मनोरञ्जनको माध्यम थियो । त्यो बेला घरमा टीभी थिएन । मोबाइल थिएन सुनाउँदा अहिलेका नानीहरु हाँस्छन् । एउटा रेडियो थियो पुरानो । धेरैअघि झापा जागिर खाँदा किनेको– बुवा भन्नुहुन्थ्यो । रेडियोमा बज्ने गीतको हतारहतार शब्द सार्नु पनि एउटा दैनिकी थियो । जब गीत सार्न थालेँ, कमिक्स र मुना पठनबाट छुट्दै गयो । अनि थपियो नयाँ पत्रिका जुन् दिदीहरुले त्यही सिर्जना स्टोरबाट ल्याउँथे । कादम्बिनी, गृहशोभा, गृहलक्ष्मी आदि । ती पत्रिकाभित्र एकाध छापिने कहानीहरु रुचिकर लाग्न थालेको थियो मलाई ।
कुनै कुनै पात्रहरु जीवन भर याद आइरहने हुँदा रहेछन् । म आख्यानका पात्रको कुरा गर्दैछु । त्यही बेला घरमा भेटियो साझा कथा । साझा प्रकाशनले छापेको किताबमा चुनिएका कथाहरु थिए । त्यहाँ गुरुप्रसाद मैनालीको बिदा कथा पनि थियो । बिदा कथाले अघोर छोयो मलाई । कथाको सरस बुनोटले पाठकलाई बाँधिराख्ने क्षमता थियो । तर वियोगान्त अन्त्यले पाठकलाई अवसादमा धकेल्थ्यो । आजपर्यन्त म मैनालीको कथा सम्झिन्छु र प्रभाको डुब्दै उत्रँदै गरेको शरीर, बिदा भनेको आवाज प्रतिध्वनित महसुस गर्छु । विजय मल्लको अनुराधा किन पागलपनबाट बौरिएनन् ! अझै छुकछुक लाग्छ । आजपर्यन्त यी पात्रहरु मस्तिष्कमा बसिरहनु आख्यानको शक्ति नै होला ।
एक मध्यान्ह । दसैंको कारण स्कुल बिदा थियो । घाम पारिलो र न्यानो लागेको थियो । हावामा ड्रागनफ्लाईहरु निमग्न कावा खाइरहेका थिए । लाग्थ्यो, चाड त उनीहरुलाई पनि लागेको छ । तर म भने उदास घर फर्किरहेको थिएँ । कारण मेहनतले बनाएको चङ्गा चेट भएर हावामै हराएको थियो । मनमा उब्जिएको थियो बदलाको भावना । दिमागमा खेल्दै थियो लट्टाईको धागोलाई अझै कसरी धारिलो बनाउन सकिन्छ । ताल परे चङ्गा चेट बनाउनेसँग भिड्ने सुर थियो । किनकि थुप्रै पटक चङ्गा चेट गराएर मेरो इगोलाई जिस्काइदिएको थियो । घरमा थियो ठुल्दाइले बनाउन लगाएको किताब राख्ने र्याक । त्यहाँ थियो मार्सल आर्टको किताब । विगतमा त्यो पढेर मभन्दा मुनि क्लासका विद्यार्थीमाथि प्रयोग पनि गरेको थिएँ ।
घरमा आएर सरासर त्यही किताब खोज्न थालेँ । तर त्यो पुस्त्तक भेट्नुभन्दा पहिले अर्को गाता च्यातिएको पुरानो पुस्तक हात पारेँ । के रहेछ भनेर पल्टाई हेरेँ । शब्दले तान्दै लग्यो । एउटा कौतुहलता जगाउँदै लग्यो । खासमा त्यो गाता उप्किएको पुरानो पुस्त्तक नेपालीमा अनुवाद भएको विदेशी आख्यान थिएछ । पछि कलेज पढ्दा अवगत भयो । जे होस् त्यो बेला मेरो बाल मस्तिष्कलाई उक्त आख्यानले यसरी रन्थनायो कि म मखलेल भएँ । सरस र मीठासपूर्ण अनुवाद र साथमा कौतुहलपूर्ण कथाले म अघोर सम्मोहित भएँ ।
एकाध दिन म त्यो पुरानो पुस्त्तकमा घोत्लिदैँ बसेँ । त्यो पुरानो पुस्तकको शिर्षक थियो ‘रबिन्सन क्रुसो ।’ समुन्द्रमा जहाज दुर्घटनाग्रस्त भएपछि भाग्यवश बाँचेर एक बिरानो टापुमा एक्लै परेका व्यक्ति रविन्सन क्रुसो । त्योबेला क्रुसोको आख्यानलाई सत्य कथा मानेर पढेँ । एक नाविकको साहस र जीवन सङ्घर्ष देखी अचम्मित भएँ । कथामा रविन्सन क्रुसो केही हप्ता क्षतिग्रस्त जहाजमा रहेको सुख्खा खाना खाएर बाँच्छन् । तर जब जहाजको खाना र पानी सकिन्छ अनि क्रुसोले गर्ने सर्भाइबल टेक्निकले पाठकलाई एडभेन्चरको दुनियाँमा पुर्‍याउँछ । प्रत्येक बिहान समुन्द्र किनारको बालुवामा कछुवाको अण्डा खोजाईको वर्णनले आजपर्यन्त मलाई रोमाञ्चित बनाउँछ । तर त्यो पुरानो किताब अपुरो थियो । रविन्सन क्रुसोको प्रत्येक बिहान आज कुनै जहाज आउँछ र उसलाई उद्दार गर्छ भन्ने आशा के साँच्चै पूरा हुन्छ ? त्यो पुरानो गाता च्यातिएको किताबमा थिएन । अनि के हुनु थियो ? म धेरै दिन छट्पटिएँ । खाना खाँदासमेत क्रुसोलाई सम्झिन्थेँ । के उनलाई लिन कुनै जहाज आयो कि त्यही बिरानो टापुमा नितान्त एक्लै मृत्युवरण गरे । कि अझै कछुवाको अण्डा खोजिरहेछन् ?
कास्टअवे सिनेमामा टम ह्यांक्सलाई धेरै वर्षपछि उद्दार गरिन्छ । के यसरी नै रविन्सन क्रुसोलाई पनि उद्दार गरियो ?
रविन्सन क्रुसो सन् १७१९ मा ड्यानियल डेफोले लेखेको आख्यान रहेछ । अंग्रेजी उपन्यासको इतिहास यही पुस्तकबाट सुरु भएको मान्नेहरु पनि धेरै छन् । भलै यसमा मतैक्य भने पाइँदैन । कसैले ‘डन किहोते’ त कसैले ‘ओरोनोको’ र कसैकसैले ‘ले मोर्ट डी आर्थर’लाई पनि अंग्रेजी भाषाको पहिलो उपन्यासका रुपमा लिन्छन् । मलाईचाहिँ रबिन्सन क्रुसो फेरि पढ्न मन लागेको छ । त्यो अपुरो किताबलाई पूरा गर्न मन लागेको छ ।
सन् दुई हजार लाग्नु केहीअघि, यो विश्वमा एउटा फेक न्युज खुब चर्चामा आएको थियो । मिलेनियम वर्ष लागेपछि विश्वका कम्प्युटरहरुले दुई अंकलाई कोड गर्ने छैनन् । अब परमाणु बमहरु आफसेआफ पड्किनेछन् र पृथ्वी ध्वस्त हुनेछ । सत्यझैं लाग्ने यो खबर अन्ततः पोस्टट्रुथ साबित भइदियो । माया सभ्यताको क्यालेण्डरझैं, कुनै धर्मगुरुको भविष्वाणीझैं अन्ततः सन् दुई हजारले पनि तमाम खबरहरुलाई झुटो साबित गरिदियो । सन् दुई हजारले पृथ्वीलाई ध्वस्त नगरे पनि विश्वलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने घट्नाक्रमहरु घटित हुँदैथियो । यही बेला बिन लादेन खबरमा आए र अमेरिकाको जुम्ल्याहा टावरलाई खरानी बनाइदिए । पाँच वर्षअघि सुरु भएको नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दै थियो ।
अखबार युद्व र मृत्युको त्रासद खबरले जहिल्यै भरिएको हुन्थ्यो । युवाहरु कि त युद्वमा थिए कि एयरपोर्टमा लामबद्व हुँदैथिए । मेरो मस्तिष्कमा नैराश्यता भरिन थाल्यो । आफूलाई ‘बिट जेनेरेसन’ ठान्न थालेँ र गलत समयमा जन्मिएको निर्क्योल निकाल्न थालेँ । गायक अरुण थापाको जीवनशैली र गीतको अचानक प्रशंसक भएर निस्केँ । अन्तत आईएको अन्तिम नतिजा पनि नकुरी म एयरपोर्टमा लामबद्व युवाहरुमध्ये एक भएँ । म अरब उडेँ ।
जसै दुबई एयरपोर्टबाट बाहिर निस्के तातो हावाले स्वागत गर्‍यो । लाग्यो, म अगेनोछेउ छु । सहरको भव्यता र विकासले भने चकित खाएँ । नयाँ सहरसँग अभ्यस्त हुन मलाई निकै समय लाग्यो । लाग्थ्यो, मलाई आँखामा पट्टी बाँधेर फिनिनिनी घुमाएर छोडिएको छ । तसर्थ म रनभुल्लमा छु । काम गर्ने बानी थिएन । देशको अवस्था कारण देखाउँदै प्रवासी भएको म, प्रवास बिल्कुलै सहज लागेन । सुरुमा अनुभवको कमीले काममा अभ्यस्त हुन समय लाग्यो ।
पुग्न पा छैन घर फिर्ने सोच मनमा पलाउन थाल्यो । खासमा म एउटा सेक्युरिटी कम्पनीमा गार्डको रुपमा गएको थिएँ । त्यो कम्पनीले अन्य कम्पनीसँग सम्झौता गरेर हामीलाई काम दिलाउँदो रहेछ । तर्सथ, जहाँ पठायो त्यहाँ जानुपर्ने र ठाउँ सरिरहनुपर्ने हाम्रो बाध्यता थियो । पहिलो ड्युटी सुपरमार्केटमा पर्यो । त्यहाँ धेरैजसो उभिनु पर्ने । उभिँदा उभिँदा खुट्टा सुन्नियो । हप्ता दिनपछि ड्युटी जान छोडिदिएँ । सुपरभाइजर खुब रिसायो । मलाई मस्त सुत्न पर्याप्त समय मिल्यो । दिनको खानापछि ओछ्यानमा के ढल्केको थिएँ क्याम्प सुपरभाइजरले बोलायो । ‘आधा घण्टामा तयार हुनू’ उसको उर्दी थियो । कुन ठाउँ सोधेँ मैले । पाकिस्तानी बोसले ठट्टा गर्दै बोल्यो — डिर्जट सफारी । मिश्री सुन्दरीका बेली डान्स आपके खिदमतमे पेस होगा ।
एक्लै – फेरि सोँधे । उसले हो मा टाउको हल्लायो । मसँग विकल्प थिएन । म सुत्न पनि आएको थिइनँ । केही पुराना साथीहरुलाई डिर्जट सफारीका बारेमा सोधेँ । उनीहरुले पनि रमाइलो हुने कुरा गरे । डिर्जट सफारीपछि साँझमा हुने खानपिन र बेली डान्समा सुरक्षा दिनुपर्ने होला, उनीहरुको अनुमान थियो ।
विशाल राजमार्ग । सयको गतिमाथि ल्याण्डक्रुजर कुदिरहेछ । मन एकतमासको भइरहेछ । कि यो राजमार्ग अजिङ्गर हो, मलाई यसले निल्दै गइरहेछ । सात, छ, पाँच, चार, तीन, दुई हुँदै जब एक लेनको सडकमा आइपुग्यौँ, गोवा घर भएको भारतीय चालकले गाडी रोक्यो । यसबीच हामी मेगा सिटी छाडेर सुनसान ठाउँमा आइपुगेका थियौँ । दाँयाबाँया चारैतिर रातो बालुवा नै बालुवा । लाग्थ्यो, मगंलग्रहको कुनै भूभाग हो । त्यो भारतीय चालकले गाडीबाट निस्केर टायरको हावा निकाल्न थाल्यो । मैले अतालिँदै सोधेँ – के गरेको ? उसले हाँस्दै भन्यो – टायरबाट आधा हावा निकाल्यो भने मात्र बालुवामा गाडी कुद्छ । नत्र गाडी फस्छ ।
साँच्चै गाडी त बालुवामा तुफान कुद्न थाल्यो । बालुवाका स–साना पहाडहरु उक्लिँदै ओर्लिंदै, कोल्टे पर्दै गाडी गुड्दा मुटु चिउँचिउँ भयो । यतिबेला मात्र बोध भयो म मरुभूमिमा छु । अरबमा छु । नत्र सहर त पैसा र मेहनतले हरियो थियो । जतिजति गाडी मरुभूमिको विशालतामा प्रवेश गर्दै गयो, मन उतिउति वेचैन हुँदै गयो । सुरुवातको एडभेन्चर आंतकमा परिणत हुँदै थियो । फेरि ड्राइभरको मलाई पुर्‍याएर आजै फकिर्ने कुराले खिन्न भएँ । उसले मलाई सम्झाउँदै थियो – मोबाइल आवश्यक पर्दा मात्र स्विचअन गर्नू । नत्र ब्याट्री सकिन्छ । पानी फारो गरेर चलाउनू । केही परे फोन गरिहाल्नू ।
अन्ततः गन्तव्य आइपुग्यो । मरुभूमिको सानो उपत्यका । वरिपरि बालुवाका स–साना पहाड, बीचमा सम्म ठाउँ । सम्म ठाउँमा वरिपरि टेन्टहरु । अन्यत्र लैजान मिल्ने सुन्दर बाथरुम, ट्वाइलेट । बीचमा स्टेज । अनुमान लगाएँ बेली डान्सर यहीँ नाच्छिन् ।
खोइ कोही छैनन् त ? – अलमल परेर सोधेँ । किन हुन्छन् त, यो बन्द भएको हो – उसको जवाफ ।
अनि मलाई किन ल्याएको ?
मलाई लानुको कारण त्यहाँ भएका महँगा सामानहरुको चौकिदारी रहेछ । त्यो डिर्जट सफारी गराउने कम्पनी बन्द भएका कारण सामान सहर नलगेसम्म मैलै सुरक्षा गर्नुपर्ने भएछ । त्यो पनि एक्लै । विशाल मरुभूमिमा एक्लै । दुई चार दिन हो भन्दै इन्डियन फर्क्यो । दिमागबाट बेली डान्स, पातलो कम्मर, हुक्का र ऊँटको सेकुवा क्रमशः धुमिल हुँदै गयो । म कठोर यर्थाथमा नराम्रोसँग बजारिएँ । यर्थाथमा महानीरवता थियो । र थियो एकाध घण्टामा आउने बालुवाको आँधी ।
खिस्रिक्क परेको म, ज्यान फालेर मरुभूमिमा पल्टिएँ । र आफैलाई खुच्चिङ् भने । पश्चिममा घाम रातो हुँदै थियो । आकाश ताक्दै विगत सम्झिएँ । कलेज, पढाइ, आवारागर्दी । काठमाडौंको वासा के सम्झिएको थिएँ कलेजो दुखेर आयो । अनि साउदी बसेर आएको एक साथीको सावधानी सम्झिएँ – मरुभूमिमा सिङ उम्रेको सर्प हुन्छ ।
भय, मनमा कुरा खेलाइले अबेरसम्म निद्रा नलागेको कतिखेर भुसुक्कै निदाएछु । ब्युझिँदा घाम झुल्किसकेको थियो । खाटमुनि हेर्छु केही घिस्रिएको डोब छ । साथीको चेतावनी याद भयो । किरा पनि हुनसक्छ, मन दह्रो बनाएँ । बिहानको नित्यकर्मपछि बालुवाको पहाड उक्लिएँ र टाढाटाढा हेरिपठाएँ । जताततै बालुवाको समुन्द्र । सजीवता केही छैन, देखिदैँन । फगत महाशून्यता । कि म सृष्टिको सुरुवाति चरणमा छु । तागेरा निङ्वाफूमाङले भर्खरै मान्छेको सृष्टि गर्न अह्राइ पठाएको पोरोक्मीयम्भामी हुँ म ।
कि म रविन्सन् क्रुसोको पछिल्लो भर्सन हुँ । मरुभूमिको महासमुन्द्रमा जहाज दुर्घटनापछि टापुमा फसेको छु । र उद्दारको पर्खाइमा छु । थाहा छैन कति समय एक्लै बस्नु छ । नितान्त एक्लै ।
प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७७ १४:३६